HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 7-january 2021
Thursday January 07, 2021 - 11:10:41 in Wararka by Mogadishu Times
Sida ay ilo xog ogaal ah u sheegeen Caasimada Online, afar xubnood oo ka socda dhanka guddoomi yaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/hi ayaa lagu dari doonaa guddiga doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi oo ay dowladda horay u magacowday.
Ilaha xogta siiyay Caasimad da Onl ne waxey intaas ku dareen in is fahamkaan lagu ga aray maga alada Garo we, oo ay ku shireen dhinacyada isku ha ya arrintan.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS Md. Cabdi Xaashi& R/ wasaare ku xigeenka XFS Md.Mahdi Gu uleed ayaa kulan ku yeeshay Garowe intii uu socday shirkii ay soo qaban qaabisay hay’adda Heritage, wa xaana lagu gaaray is fahamka ah in afar xubnood la siiyo Cabdi Xaashi laguna daro guddiga hadda.
Md.Cabdi Xaashi wuxuu horay si cad uga soo hor jeestay guddigii ay dowladda magacowday, isagoo ku dooday inuu yahay qofka ugu sarreeya ee matalaya dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi isla markaana uu xaq u leeyahay inuu soo xulo guddiga doorasha da, balse sida la tabinayo waxaa lagu qanciyay in 4 xubnood loogu daro guddiga.
Guddiga doorashada heer Federaal oo ay dowlad da magacowday aan lagu wada qanacsaneyn, wax aana si cad uga hor yimid dhammaan musharixiin ta u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Fa rmaajo ayaa la filayaa inuu wax ka badalo qaabka loo wado guddiyada doorashada kadib cadaadis uga yi mid beesha Caalamka iyo musharixiinta.
Maxay ka wada hadleen Ra’iisul Wasaare Rooble iyo C/raxmaan C/shakuur
R/Wasaaraha XFSMd.Maxamed Xuseen Rooble ayaa Shalay xafiiskiisa ku qaabilay Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsa me. R/Wasaaraha iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadaj ir ayaa ka wada hadlay qabsoomidda doorasho daahf uran oo si nabdoon ku dhacda, xallinta tabashooyin ka la xiriira arrimaha doorashada iyo in dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhami xil iska saaraan xa silloonida dalka, kana fogaadaan hadal ama ficil kas ta oo niyad jab ku ah shacabka Soomaaliyeed.
RW.Rooble ayaa mar kale xaqiijiyay sida uu diyaar ugu yahay in uu la fariisto dhammaan siyaasiyiinta iyo daneeyeyaasha doorasha dalka, si uu uga dhage ysto talooyinkooda, loona sii ambaqaado qabsoomi dda doorasho loo dhanyahay.
Md.C/raxmaan C/shakuur ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay waxaa uu sheegay in isaga iyo R/Wasaaraha ka wada hadleen tabashada ka jirta doorashooyinka. "Waxaan Shalay xafiiskiisa kulan ku yeelanay Raysalwasaaraha DFS Md.Rooble. Wax aan ka wada hadalnay tabashada doorashooyinka ee la xariira guddiyada, arrinta Somaliland iyo Gedo. Wu xuu balanqaaday in uu diyaar u yahay xalinta taba shooyinka iyo xaqiijinta doorasho si nabad ah oo da ahfurnaan leh ku dhacda. Waxaan kalooo ka wada hadalnay xorriyada ololaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kulamada dadwaynaha iyo dibadbaxyada iyo laga wada shaqeeyo xasiloonida dlaka”ayuu yiri Md.C/raxmaan C/shakuur
London: Weriye Axmed Cabdinuur oo u Geeriyo odey Covid 19
Axmed Cabdinuur, oo ahaa weriye in badan ka shaqeynayey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ay aa Shalay London ugu geeriyooday Covid 19. Axmed ayaa la sheegayaa in BBC Som ali ku biiray 1996-dii ilaa mar kii dambe uu shaqada ka fariisto 2019-kii, waxaa na uuna deganaa London. 2019
Weriye Cismaan Cabdi Xasan oo ka tirsan BBC So omaali ayaa Goobjoog News uga warr amay sha khsiyaddiisa isaga oo yiri ‘Waxaa uu ahaa weriye we yn, oo muddo dheer ka soo shaqeeyey BBC iyo Rad io Muqdisho, waxaa lagu xusuustaa Xalay iyo caal amka iyo barnaamijyo kale’ Weriye Cusmaan oo sii hadlaya ayaa yiri ‘ Waxaa uu ahaa qof dabeecad wanaagsan, oo banii’aad ah, deggan oo naxariis badan’. Weriyaha geeriyoodey ee Axmed Cabdinuur, waxa a uu ifaka uga tagay 1 wiil &Xaas.
Yusuuf Garaad oo wax ka qorey Taariikhda Axmed Cabdinuur
Ambassador Yusuf Garaad Cumar ayaa qormada an uga hadlaya taariikhdii saxaafadda AUN Axmed cabdi Nuur oo kooban.
Aad ayaan uga naxay ugana muruge ysanahay geerida Axmed Cabdi Nuur oo ah walaal aan muddo dheer soo wada shaqeynay oo ku geeriyooday London.
Axmed wuxuu ahaa weriye caan ku ah warbaahinta Qaranka, Radio Muqdisho oo uu warar ka iyo Sportiga caan ku ahaa iyo Teleifi shinka Qaran ka oo uu midkood ahaa labadii weriye ee ugu horreey ay ee u kaltami jiray akhrinta warar ka. Markii iigu ho rreysay ee aan barnaamij idaacad ka akhriyo wuxuu ahaa labadii weriye ee aan la akhr iyay midkood. Mar ayuu noqday weriyaha Madaxwe ynaha Soom aaliya ka hor dagaallada.
Waxay ahayd markii uu saaxiibkii Cawke oo ahaa weriyaha Madaxweynuhu uu shil baabuur galay oo gacan ka jabay. Mar kale wuxuu noqday Madaxa Xaf iiska Wararka iyo ka dib, Madaxa Radio Muqdisho.
Wuxuu noqday weriye BBC uga soo warrama Muq disho qaar ka mid ah xilli yadii ay ugu colaadda bad nayd, ka dibna xarunta BBC Bush House iyo Broadc ast ing House ee London ayuu sannado ba dan ka shaqeeyay.
Nin deggan, oo aan caaddifad aqoon ayuu ahaa, oo wararka dhacdooyinka uu tebinayo ka dhowra in dareenka iyo danihiisa shakhsiga ahi ay saameyn ku yeeshaan. Mas’uul wuxuu ahaa afgaaban se hadalka xikmad da iyo xusuusta reeba heli og.
Axmed Cabdi Nuur Allah ha u naxariisto, ehelkiisa iyo saaxiibbadiisa faraha bandanna samir iyo iimaan Allah ha ka siiyo.
Ilaahow Jannada ugu bishaaree.
Maxa tahay arrinta dib u dhigtay heshiiskii la fila yey ee DF iyo shirkadaha shidaal?
Heshiiska shidaalka oo dorraad illaa Dorraad la fill aayay in uu ka dhaco M/Muqdisho ayaa dib u dha cay, ka dib markii ay soo baxeen arrimo aan lagu sii tala-gelin. DFS ayaa heshiiskan la galeysay 2da shir kadood oo dibadda laga leeyahay, laguna kala maga caabo Coastline iyo Liberty.
Madaxda 2da shirkadood oo maalmihii ugu dambe ysay ku sugnaa M/Muqdisho ayaa Shalay dib uga dhoofay, sida ay wararku sheegayaan. Waxaa soo ba xaya warar sheegaya in khubaro ka tirsan Baanka Adduunka ay walaac ka muujiyeen inaan heshiiska loo marin xeerka qandaraasyada lagu bixiyo, dowlad ana ay dib isugu laabatay, si la isku waafajiyo shuruu cdaas iyo hannaankii la rabay in loo maro.
G/Midowga Musharaxiinta ayaa Axa dii si weyn u ga horyimid heshiiska la fill ayay in DFS ay M/Muqdisho kula sa xiix ato shir ka dahaasi shisheeye.Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sababeeyay sababta ay u diidan yih iin heshiiska uu Golaha Midowga Mu sharaxiinta she egay in ay DFS dooneyso inay la ga sho 2daasi shirkadood.
"Walaaca noo muuqdo wuxuu yahay, xog waxaan helnay in W/Batroolka ee DFS ka ay dooneyso inay heshiis la gasho 2 shirkadood, heshiiskaasoo la xiri ira ruqsad siin ay ku bixineyso ruqsad baaris shidaal lagu sameynayo dalka meelo ka mida, arrintaasaa walwal iyo walaac weyn aan ka qabnaa, saasaana ku soo saarnay qoraalka aan la wadaagnay dadka Soo maaliyeed iyo shirkadihii ay arrintaan quseysay, inta ba,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
"Sharciyada shidaalka iyo hannaankiisa ma dham eystir na, sidaad la socotaan sharciga wadaagga kha yraadka weli lagama heshiinin, sharciga canshuuraha la xiriira wixii ka soo baxa khayraadka dabiiciga weli ma dhameystirna, sharciga iibka shidaalka isna ma dhameystirna. Marka sharciyadii la xiriiray shidaalka hay’adda waad la socotaan xukuumaddii xil gaars iinta R/Wasaare Kuxigeenka, Mahdi Maxamed Guule ed uu sii haayay ayaa lagu ansixiyay oo sharci darro ayay ahayd oo ma haysanin xukuumadaas kalsoon ida Baarlamaanka.” Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale she egay in barnaamijka oo dhan iyo hab lagua wado uu yahay sharci-darro, sida uu shee gay. "Waxa dhan ayaa (kow) sharci darro ku dhisan, 2 waxaan sharki weyn ka qabnaa xilliga lagu soo aad iyay, iyadoo dhawr & 40 Maalmood ay ka harsan tahay xilka Madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo in la yiraahdo shirkado shidaal ayaa heshiisyo lala gela yaa waqtiga aadka u kooban ee ka dhiman muddo xil eedkii Madaxweynaha iyo Hay’adaha Dast uuriga, Baarlamaanka tiisiina ay dhammaatay. Waxaan u ar agnaa maslaxo qaas ah oo ololaha doorashada lagu gelaayo inay tahay, hantina looga raadinayo shirkad ahaasi. Marka anaga walwalkaasaa qabnaa, waana ka digeynaa, Madaxweynahana qoraalaa u dirnay, shirkadaha arrintaas raba inay galaana qoraalaa u dir nay,” ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo la hadlay BBC
Waa maxay sababta uu mas’uulkan Soomaa liye ed uga cudur daartay inuu booqday dalkiisa Somalia?
Sharmaake Dubow oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Victoria ee dalka Canada ayaa raaligelin ka bixiyay booqasho uu fasax iisa sanadkii tagay ee 2020 ku tagay Soomaaliya.
Bartiisa bulshada ayuu soo dhigay bayaan ka turju maya raaligelintiisa, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu u hogaansamayo habraaca caafimaad ee maxaliga ah, wuxuuna hadalkiisa gadaal ka raaciyay inuu dhawr jeer maray tijaabooyin caafimaad.
Inkastoo baaritaanno kale la marin doono xildhibaan ka hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Vanc ouver oo uu karantiil ku yahay, muddo laba todobaad ayuuna halkaas baaqi kusii ahaan doona.
Sharmaake Duubow wuxuu ka mid yahay dhawr si yaasi oo jabiyay xeerka xayiraadaha sa farka ee loogu talagalay in looga fog aado xanuunka dunida dhibaateeyay ee Covid19, sida ay warbaahinta gudaha baahiyeen badankood siyaasiyiinta wey iska casileen xilka ay hayeen walow Sharmaake uu raaligelin bixiyay.
Sharmaake si toos ah ayuu u sheegay inuusan dooneyn inuu iska casilo xilka, isla markaana uu sii wadi doono adeegga uu u hayo deegaanka uu ma talo, wuxuuna sheegay in markii ugu horreysay mud do ku dhaw 30 sanadood uu tagay Soomaaliya.
Sharmaake isagoo dareensan inuu qaatay go’aan aan fiicneyn ayuu hadana ku adkeystay inuu xilkiisa sii haayo, waxaana cajiib ah inuu kursigaan ku guule ystay sanadkii 2018 isagoo kaliya muwaadin Canad ian ah noqday sanadkii 2017
Soo Saaritaanka Shidaalka Soomaaliya oo Qaa dan Doona 20-sano
Waxa isa soo taraya walaca iyo cabashada ay ka muujinayaan Aqoonyahanada wax-garadka iyo Bul shada rayidka heshiiso la sheegay in ay dow ladda la galeyso shirkada shidaal. Markale Aqoonyahan C/dir Abiikar Xuseen ayaa faah faahin ka bixinaya waxa ay yihiin Baloogya da ay dowladda ka iibineyso shirkadaha shidaalka.
"Waa su’aal u baahan in shacabka loo sha raxo u baahan in la fahmo, boloks ceelal ma ahan ee waa dhul la baaray oo loo maleeyo inuu shid aal ku jiro potential, marka dhulka qaabkiisa la fii riyo oo lagu baaray baaristaan zismiskada ayaa wax aa la ogaaday meelaha qaar in ay wax ku jiraan, laak iin ceelal maahan waa xirmooyin badda salkeeda oo dhulka hoose ku yaalla waaye, ceelal, nimankaan ha dda shaqada la siinaayo prodection sharing ayaa wax aa ay sameynayaan baaritaan meelihii lagu mareey ey ayey baarayaan waxaana ay baaritaan dheeraad ah markaas kadib ayey ceelka qodaayaan haddii ay shidaal helaan iyo haddii kale”.
"Markii ay helaan waysii shaqeynayaan shaqo la dhaho attaresal waxaa la fiirinayaa hareerihiisa ma xaa laga qodi karaa, waxa meesha ku jira muxuu noq on karaa ku jira, markii intaas la sameeyo ayaa wax aa loo gudbayaa waji kale, wajigaas koowaad haddii Shalay shirkadda loo saxiixo 2040 ayey noqonaysaa, shacabka Soomaaliyeed taas ayaa loo baahan yahay in ogaadaan taas, shidaalka haddii lala sixiixdo lix bilood gudaheeda ayey ku imaan kartaa hadda lasoo saarayo waxaan rabaa Soomaali in ay ogaadaan haddii ceel mar maxaa ceelal laga heli karaa meeha, baaristii la rabay ayey samaynaysaa”.
Haddii ay samayso three D Zisemik waxaa ay qaa danaysaa laba sano oo lagu daray lix bilood oo ceel ka qodistiisa ah, ceelka xitaa waxaa u baahan yahay waa badda gudaheeda waaye waa in strecture plan form ama fpso la sameeyaa taas waxaa ay qaada naysaa laba sano , kadib waxaa loo gudbaa develo pment kaligiis ayaa waxaa uu qaataa 10sano , me esha ceel badan ayaa la isku xiraa ayaa la hormar inaa beebyo ayaa loo samaynaa meelo ay ka burqad aan ayaa loo samaynaa meelo ay ka burqadaan ayaa loo samaynaa, meelo ay wax laga rari karo ayaa loo samaynaa”
"inta badan lacagta maal gelinta ah shidaalka wax aa ay dhacdaa waqtiga developmentiga kan ugu gaa banna waa 8 sano ilaa 12 sano ayuu soconaa, tusa ale Muzembic markaan soo qaato waxaa ay heleen 2010kii meelahaas ilaa 2005 ayey heleen shildaal ba dda ah, ilaa iyo haddana majiro shidaal weyn oo xag ga badda mahelin woxooduna waa Gas, haddii xitaa Gas aan waa uu sii daahayaan, markii developmen tiga uu dhamaado ayaa protection la bilaabaa, markii la bilaabo 5sano ee ugu horeyso shirkaddii waxaa ka gashay dhowr bilyan oo dollar iyadaa waxaa ay isku dayeysaa in marka hore wixii qarax ka galay ay soo ceshato 5 sano ka dib ayaa 2040 ayey Soomaaliya bilaabi kartaa in ay soo saarto, haddii wax kasta ay caadi u socdaan daahid aysan soo gelin ”
Soomaaliya markii ceelka la helo attrezal ayey samaysaa, kadib development 10 sano waaye 5sano waxaa qaadanayso shirkadii maaligelintii ay suubisay in lacagtii ay dib u ceshato, markaas ayaa la bilaaba yaa in Soomaaliya ay faaiido hesho taasna waa 2040-ka oo laga yaabo markaas in shidaalka laftirkii sa laga gudbay oo cadceeda oo guuray adduunya da, marka arrintaan hadda la galaayo, waa arrin waq tigii ugu dambeeyey ee shidaal dunida ay raadin lah aayeen ayaan raadinaynaa, nasiib waxaan leenahay wati yar oo intaa shidaalka uu faaiido sii leeyahay ay aan suu binaynaa”
” Shidaalka qiimahiisa Shalay aad iyo aad aayuu u yar yahay waa 50$halkii fuusto meesha laga qodaay ana waa bad aad iyo aad mool u ah, shirkadaha rajaynaayo waqtigaan oo price aad iyo aad u yahay qodiddana ay bad mool ah tahay oo ka batabadan 1800 m ilaa 2500m ay abaddaas tahay shirkadaha u bareeri kara logicaly iyo financialy waqti yadaan hadda la joogo Soomaaliya shirkadahaan yaryarka ah inay kala wareegaan oo usoo bareer ikara waa yaryihiin waa caqabadaad na horyaalla waaye Waxaa uu dib u dhac ku yimid heshiis lagu waday in ay Dowladda Soomaaliya la saxiixato laba shirkadood, si ay sahmin shidaal, baaris iyo qodisba uga sameeyaan dalka. "
PUNTLAND oo shaacisay inay bixineyso magta Nadiiro Faysal Shire
Wasiirka w/Amniga Puntland, Cabdisamad Max amed Galan oo war qoraal ah soo saaray ayaa ka ha dlay dilkii loo geystay Allaha u naxariistee marxuum ad Nadiiro Faysal Shire oo dhowaan lagu dilay M/Gar oowe. Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay bixineyso magta gabadhaasi yar oo 15 sano jir aheyd, islamarkaana u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray rasaas ay ciidamada ammaanka Puntland dhowaan ku fureen dad dibad-baxaal ah oo ku sug naa Garoowe.
Warqaddan ayaa lagu socod-siiyay W/Maaliyadda Puntland, islamarkaana la ogeysiiyay qoyska marxu umadda oo horey u dalbaday inay helaan cadaalad.
Sidoo kale waxaa qoraalka loogu caddeeyey ehell ada marxuumadda in mas’uuliyadda ay la waregtay dowlad goboleedka Puntland.
Dorraad ayey aheyd markii warsaaxafadeed ka soo baxay xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntl and, si adag looga hadlay dhacdadaasi dilka ah.
Maleeshiyaad hubeysan oo dad ka afduubtay degaan ka tirsan Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya degaanka Goobo oo 11 km u jira degmada Matabaan ee G/Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan ay dad ka afduubteen degaankaas.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa dadkaasi oo gaa raya 8 rag ah kala egay Gaari ay saarnaayeen oo ka yimid dhinaca degmada Guriceel, isla markaana ku soo jeeday Magaalada Muqdisho. Maleeshiyaadka afduubka geystay ayaa gobjooga yaal sheegeen inay u abaabul naayeen hab beeleed, isla markaana arrintaan ay salka ku heyso dilal dhaw aan ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Matabaan iyo degmada Guriceel.
Maamulada Galmudug iyo Hir-Shabeelle weli ka ma hadlin falkaasi afduubka ah, hayeeshee waxaa xusid mudan in 7baad ka hor degaano hoostaga D/ Matabaan siyaabo kala duwna loogu dilay dad shac ab ah oo wadada ku safrayay.
Maamulka Hir-Shabeelle oo faah faahiyay howlga llo dad farabadan lagu qabqabtay
Ciidamada Ammaanka ka howlgalla Magaalada Jowhar ayaa waxaa ay Xaafado ka tirsan Magaalad aasi ka sameeyeen howlgallo lagu xoojinayo amniga Magaalada, iyada oo howlgaladaas lagu qabqabtay dad farabadan.
Howlgalka oo ay siwadjir ah u fuliyeen Ciidamo isugu jira, Boolis, Nabadsugid, ciida mada sida gaarka ah u tababaran ee Ciidamada Ha ramcad iyo kuwa AMISOM ayaa baaritaano waxaa ay ka same eyeen Xaafadaha qaar iyo wadooyinka Magaalada Jo whar. Taliyaha Howlgallada Maamulka Gaashaanle Dhexe Muqtaar Cabdulle Nuur ayaa sheegay in howlgal ka ay Ciidamada kusoo qabteen dad lagu tuhmaayo inay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Shabaab.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in howl galka ay ku qabteen Agab kala duwan oo ay lahaaye en Al-Shabaab, isla markaana howlgalalda ay ahaa yeen kuwo maalmihii la soo dhaafay ka socday Mag aalada Jowhar.
Ugu dambeyn Taliyaha waxaa uu sheegay in xo gaha ay ka heleen Shacabka ay ku howlgallaan, wax aana uu balan qaaday inay howlgalalda kasii wadi do onaan Afarta Xaafadood ee Magaalada Jowhar.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay falal amni darro, iyada oo sanadkii tegay ee 2020 lagu dila y tiro Xildhibaano ah, iyada oo Magaalada Jowhar ay kamid tahay meelaha la filayo inay ka dhacaan doo rashoyinka labada Aqal ee BFS.
Uganda oo kala baxeysa qaar kamid ah Ciidama da ka jooga Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa shaaciyay in dowadiisa ay Somaaliya kala baxe eyso CIidamo sigaar ah u tabab aran, kuwaas oo ku howlgalla Mag aca AMISOM.
Madaxweyne Musaveni ayaa shee gay in Ciidamadaas ay ka qe yb qaadan doonaan howlaha sug ida Amniga door ashooyinka ka dhacaya gudaha dalkaasi Uganda 14-ka Bishaan si looga feejignaado falal amni darr oo dhaca.
Ciidmada ayuu sheegay inay sigaar ah u ilaalin doonaan Amniga Guud ee Caasimadda daka Uganda ee Kambala, isla markaana ainay Soomaaliya Cii damada kala baxaan ay ku qasabtay sababo la xiriira dhanka Amniga.
"Xubnaha Mucaaradka waxay ku hanjabeen inay gubayaan kaalimaha shidaalka ee Kampala. Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaysan jirin cid gubaysa Kampala, ”ayuu yiri Museveni.
Cabsida la xiriira dhinaca amniga ee dalka Ug anda ayaa timid wixii ka dambeeyay markii uu dha cay dhawaan iska horimaadyo maalmo socday oo u dhaxeeyay taageerayaasha mucaaradka, kadib mar kii Boolisku xireen Musharax Madaxweyne ahna Mu usikiistaha Caanka ah ee lagu Magacaabo Robert Ka gulanyi.Dowladda Uganda ayaa ah dowladda ugu ba dan ay Soomaaliya ka joogaan Ciidamada ku howlga lla Magaca AMISOM, iyaga oo Ciidamada dowladda ka taageeraya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Khubaro Baareysay Asalka COVID-19 oo Loo Diiday In ay Galaan Dalka Shiinaha
Koox ka socota Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa loo diiday in ay galaan dalka Shiinaha.
Kooxdan ayaa ujeedkoodu ahaa in ay baaritaan ku sameeyaan halka uu ka soo jeedo xanuunka COVID-19 oo dabayaaqadii 2019-kii ka dillaacay dalkaas kaddibna ku faafay dunida inteeda kale.
Hay’adda oo ka hadashay arrintan ayaa sheegtay in kooxdii ka socotay loo diiday dal-ku-galkii ayku tagi lahaay een Shiinaha. Beijing ayaa horay u oggolaatay baari taan lagu sameeyo xanuunkan kaddib wadahallo bilo socday oo ay la yeelatay WHO.
Bishii December ee 2019 ayay ahayd markii ugu hor reysay xanuunkan lagu arkay suuq ku yaalla Wuhan ee dalka Shiinaha.
Agaasimaha guud ee Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in uu ka niyad jabay in Shiinuhu aanu wali soo saarin oggolaansha dal ku galka ee kooxda ka socota hay’adda.
WHO ayaa koox ka kooban 10 qof oo baarayaal caalami ah u diyaarisay in ay xog buuxda ka keenaan asalka xanuunka Korona iyo waxa dhaliyay in uu aadanaha u soo tallaabo.
Horay ayaa loo shaaciyay in baaritaankaasi uu billaaban doono bishan January.
Qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho & wararkii ugu dambeeyey
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga hel ayaa qarax saaka ka dhacay qeybo ka mid ah mag aalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kaas oo ay ka soo baxayaan warar kala duwan.
Qaraxa oo ahaa nooca mii nada ee dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay wadada Cabdiqaa sim ee deg mada Hodan ee gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay ciid amo ka tirsan kuwa Asluubta Soomaaliyeed oo ku socdaalayey wadadaasi oo isku xirto isgoysyada KM4 iyo Tarabuunka ee magaalada Muqdisho
Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa caasim ada ka dhacayey qaraxyo nooca miinada ah, iyadoo midkii ugu dambeeyey uu habeen hore ka dhacay wa dada 21 October ee degmada Waabari, kaas oo lala eegtay gaariga Afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali.
Danab Oo Sheegtay In Duqeyn Lagu Dilay Wariy aal Iyo Saraakiil Ka Tirsan Al-Shabaab
Ciidanka Dowladda ayaa sheegay in ay Bur-bur iyeen Xaruntii ugu weyneed ee Idaacada ku hadasha Afka Al-shabaab ee Degaanka kuunya Barow oo hoo staga Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellada Ho ose , waxaana ay sheegeen in ay kaashadeen Kuma andooska Xoogga Dalka iyo Africom.
Saraakiil ka tirsan Kumaan dooska Danab oo la ha dlayay Idaacada Ciidamada Qalabka Sida ayaa she egay in weerar ka duqeynta ahaa lagu dilay wariyaal ka tirsanaa Ida acadda la bur-buriyay iyo xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha Danab waxa ay sheegeen in Du qeynta lagu dilay Agaasimaha Idaacada ku hadasha Afka Al-shabaab C/Raxmaan Cali oo Magaca Afgara shada Al-shabaab looga garan og yahay uu yahay khaashic , Wariye Ahamed Dalmar Abuu Warsame iyo Wariye Maxamed Cali Aadan.
Turkiga oo soo gudbisay codsi ku aadan dhisma ha Jidka Muqdisho iyo Afgooye kadib qaraxii ka dhacay Kulan looga hadlay sida laga yeelayo weerarada lagu bartilmaameedsado Muwaadiniinta Turkida ah ee Soomaaliya ku sugan gaar ahaan Howlwadeenn ada ku howlan dhismaha Wadada isku xirta Muqdi sho & Afgo oye oo dhowr jeer lagu qarxiyay.
Dibl umaas iga ugu sareeya Turkiga ayaa Talaada dii la kulmay Milkiilaha shirkada En-Ez ee qaadatay mashr uuca ay bixisay Dowladda Qadar ee dib loogu dhis ayo laamiga 30-ka KM ah ee ka baxa Caasimad da Dalka kuna xira Degmada Afgooye ee Gobolka Sha beelaha Hoose.
Mevlut Cavusoglu ayaa fadhiga uu la yeeshay Hi dayet Zorlu oo ah Milkiilaha Shirkadda Turkiga ee ku guuleysatay Tartanka loo galay cidda qaadaneysa dib u dhiska wadadaan oo ah qayb kamid ah kaal mada taageeraha ah ee Xukuumadda Dooxa ay siisay dhiggeeda Muqdisho.Dowladda Turkiga ayaa dalbatay in uu san joogsan mashruuca lagu dhisayo laa miga xiriiriya Muqdisho & Afgooye oo laga dhisay ku dhawaad 20 KM, waxaana xusid mud an in Xuk uumadda Ankara ay ku waysay Injineero & howlw adeenno kale oo la shaqeyneysay, halka kuwo kale ay dhaawacmeen.
Xukuumadaha Muqdisho & Ankara ayaa cambaa reeyay qaraxii ugu dambeeyay oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa Sabtidii 2-da Janaayo 2021 ka dhacay Gobolka Shabeelaha Hoose, waxaa na ku dhintay kuna dhaawacmay Howlwadeenno & askar ilaalo u ahayd, mas’uuliyadda waxaa dusha saaratay Al-Shabaab.
Baarlamanka D/G/Hirshabelle oo kuguda Jira Kal fadhiga 1aad ayaa Fadhigiisa 14 kuyeeshay Caa simada Hirshabelle ee jowhar, Kulanka oo uu shir Gu doominayey Kusimaha G/B/ ahna Gudoomiye kuxigeenka 1aad Md. Siraaji Sheikh Isxaaq ayaa Aj endahiihu ahaa Qeybinta iyo Akhrinta Xeer Hoosadka Baarlamanka iyadoo Xoghayaha Guud ee Golaha Md. Abdiwahid Mohamed Hussein (Wadaariyad) uu Xildhibaanada Kahor Akhriyey Cutubka 1aad oo ka kooban 10 Qodob iyo Cutubka 2aad oo ka kooban 7 qodob oo dhamaantod ah Xeer Hoosadka Baarlaman ka Dowlad Goboledka Hirshabelle.
Ugu dambeyn Kusimaha G/Baarlamanka ahna Gudoomiye kuxigeenka 1aad Md.Siraaji Sheikh Isx aaq ayaa soo xiray Fadhiga isagoo xildhibaanada ku wargeliyey in akhrinta Xeer Hoosadka sii socon doo no ilaa laga dhameyo Cutubyada iyo Qodobada uu ka kooban Xeer Hoosadka Baarlamanka
Booliska Hong Kong ayaa xiray ku dhowaad 50 qof Shalay oo arbaco ah waxaa ay iskugu jiran kuwa u ololeeya dimuqraadiyadda iyo sharci dejiyaal hore iyaga oo looga shakiyay in ay jabinayaan sharciga amniga qaranka ee dalka.
Dalka la xiray waxaa ka mid ah sharci-dejiyayaa shii hore, kuwaas oo si ballaaran uga soo horjeeday dhaqdhaqaa qa dimuqra adiyadda ee Hong Ko ng, warbaahinta maxalliga ah ay aa soo warisay, in hanaanka dolwad da ee la xiriiro sharciga kaas oo ay dimuqaraadyi intu u arkaan mid aan la isku waafaqsaneyn.
Wasiirka amniga John Lee ayaa yiri: "Howlgalka Shalay waxaa lagu bartilmaameed-sanayaa canaas iirta firfircoon ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin fal dambiyeedka afgem